Shamwari dzako. Bhaibheri rinoti: “Usashamwaridzana nomunhu asingatani kutsamwa; uye usafambidzana nomunhu ane hasha kwazvo.” (Zvirevo 22:24) Saka kana uri munhu asingatani kutsamwa, usashamisika kana vanhu vachiramba kutamba newe. Musikana anonzi Jasmine akati, “Kana usingagoni kudzora hasha dzako, uchatadza kuwana shamwari dzakanaka.” Unhu hwako. Ethan ane makore 17 akati, “Kana uchikurumidza kugumbuka, vamwe vachazviona uye vachange vava kutoziva kuti uri munhu wehasha.” Zvibvunze kuti, ‘Ndinoda kuti vamwe vandione semunhu akaita sei? Semunhu anoda zvekugarisana nevamwe zvakanaka here kana kuti semunhu asingatani kuputika nehasha?’ Bhaibheri rinoti: “Munhu anononoka kutsamwa ane ungwaru kwazvo, asi asingashiviriri anokwidziridza upenzi.”—Zvirevo 14:29.
“Pandakanga ndiine makore 13, ndainetseka nenyaya yehasha. Vanatete nanababamunini vangu ndiro dambudziko ravainarowo. Saka taingoti ndezvedzinza.”—Kerri.
“Chinokosha ndechokuti udzidze kuzvidzora. Kana ukava munhu munyoro woramba uchiita zvakanaka, nyaya yokudzora hasha haizombokunetsi.”—Daryl.
“Pandinopindura mumwe munhu zvakanaka, zvinobva zvaita kuti munhu iyeye adzikame, zvoita kuti titaure tisina hasha.”—Jasmine.
“Dzimwe nguva ndinoona zviri nani kumbosuduruka uye pava paya, pandinenge ndagadzikana ndozoona kuti ndingagadzirisa sei dambudziko racho.”—Gary.
“Hazvina kuipa kuti tizvidembe kana tichinge takanganisa, asi kukanganisa ikoko kunotipawo chidzidzo. Tinofanira kubva tagadzirisa zvacho zvatakakanganisa totsidza kuti hatizozvidzokorori futi.”—Kerri.
“Ndaifunga kuti kuzvidzora chiratidzo chokutya, asi iye zvino ndava kuona kuti kana ukazvidzora unenge uchiratidza kuti unozvininipisa. Kuva neunhu uhwu kunokosha chaizvo. Ndine dambudziko rokuzvidzora, asi pandinoedza kuzvidzora ndinobva ndaona kuti zvatondibatsira!”—Alyssa.
“Kumboti mirei zvishoma ndisati ndaita chimwe chinhu kunondipa nguva yokunyatsofunga zvoita kuti ndisazoita zvinhu zvandinozodemba. Kutaura chokwadi, kutsamwa hakuna zvakunombogadzirisa. Kunogona kuita kuti zvinhu zvinotonyanya kuipa.”—Erik.